I-Doogee V20: ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa | Iindaba zegajethi
I-Doogee V20: ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa
UIgnacio Sala | 13/01/2022 08:56 | Iiselfowuni
Omnye wabavelisi be-smartphone ogxile kwimisebenzi yakhe kwii-smartphones ezinqabileyo e-Doogee, umenzi othi minyaka le usungula i-smartphone. uluhlu olubanzi lwezixhobo kulo lonke uhlahlo lwabiwo-mali kwaye ngoko ukuhlangabezana neemfuno zenani elikhulu labasebenzisi.
Lo mvelisi usandula ukubhengeza ngokusesikweni i-terminal entsha. Sithetha ngayo Dodge V20, i-terminal apho lo mvelisi afuna ukuzimisa njenge ibhentshi kwicandelo le-smartphone erhabaxa, kungekhona nje ukuchasana kwayo kodwa kunye nokusebenza kwayo okuphezulu.
Ukuba ujonge i-smartphone ehexayo kwaye umenzi we-Doogee uphakathi kweebrendi ezithathwa njengokhetho, ke siya kukubonisa. zonke iinkcukacha zeDoogee V20 entsha.
1 Doogee V20 Iinkcukacha
2 Iprosesa ye5G
3 Umboniso we-AMOLED
4 Iikhamera ezi-3 kuyo nayiphi na imeko
5 Ukumelana nazo zonke iintlobo zokothuka
6 Ibhetri yeentsuku ezi-2
7 Imibala, ukufumaneka kunye nexabiso le-Doogee V20
Doogee V20 Iinkcukacha
Inkqubo I-8 cores ene-chip ye-5G
Imemori ye-RAM I-8 GB LPDDR4x
Ukugcina I-266 GB UFS 2.2 - yandiswa ukuya kwi-512 GB ngekhadi le-microSD
Isikrini esiphezulu I-6.4-intshi ye-AMOLED eyenziwe yi-Samsung - Isisombululo 2400 x 1080 - Umlinganiselo 20: 9 - 409 DPI - Uthelekiso 1: 80000 - 90 Hz
umboniso wesibini Ibekwe ngasemva ecaleni kwemodyuli yeefoto ezine-intshi ezi-1.05
Iikhamera zangasemva I-sensor ephambili ye-64 MP kunye ne-Artificial Intelligence - HDR - Imowudi yasebusuku
Inzwa yombono we-MP ye-20 ebusuku
8 MP Ultra Wide engile
Inkqubo yokusebenza Android 11
Iziqinisekiso IP68 - IP69 - MIL-STD-810G
Bethandiya I-6.000 mAh-Ixhasa i-33W yokutshaja ngokukhawuleza-Ixhasa ukutshaja okungenazingcingo kwe-15W
Imixholo yebhokisi Itshaja engama-33W – intambo yokutshaja ye-USB-C – Incwadi yomyalelo – Isikhuseli sesikrini
Ukuba awuhlali uhlaziya i-smartphone yakho rhoqo ngonyaka, kuya kufuneka uqale ukuqwalasela ukuba kunokwenzeka khetha imodeli ye-5G.
Nangona kusekho ixesha elincinci lokuba uthungelwano lwe-5G lufumaneke kulo lonke elaseSpain nakwamanye amazwe, ukufumana i-smartphone efana ne-Doogee V20 5G kuya kukuvumela ukuba dYonwabela esona santya siphezulu se-intanethi kwisixhobo sakho kwiminyaka ezayo.
I-Doogee V20 ilawulwa yi-a Inkqubo engundoqo ye-8, kunye ne-8 GB ye-RAM yohlobo lwememori ye-LPDDR4X ukuze imidlalo kunye nezicelo ziqhube ngesantya esiphezulu esinokwenzeka.
Ngokuphathelele ukugcinwa, enye yezona ngongoma zibalulekileyo namhlanje xa kuthengwa i-smartphone, kunye ne-Doogee V20 asiyi kushiywa ngasemva, kuba ibandakanya I-256 GB yendawo yohlobo lwe-UFS 2.2. Ukuba iyawa mfutshane, unokwandisa indawo ngekhadi le-microSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB.
Ngaphakathi kweDoogee V20, sifumana Android 11, eya kusivumela ukuba sifake nayiphi na inkqubo ekhoyo kwi-Play Store.
Inguqulo ye-Android ekhoyo kwi-Doogee V20, iquka a umaleko omncinci wokwenza ngokwezifiso, ngoko ke akuyi kuba yingxaki ukukwazi ukufumana okuninzi ngaphandle kokubandezeleka kunye nezicelo abadla ngokuzifaka abavelisi kwaye, kwiimeko ezininzi, akukho mntu usebenzisa.
Njengoko ixabiso lezikrini ezinobuchwephesha be-OLED sele zidumile, wonke umntu angathanda ukukwazi ukonwabela umgangatho esinika wona. I-Doogee V20 ibandakanya a Uhlobo lwesikrini se-AMOLED senziwe yiSamsung (oyena mvelisi mkhulu wezikrini ezihambayo kwihlabathi).
Isikrini sifikelela kwi-intshi ye-6,43 kunye nesisombululo se-2400 × 1080 pixels, ukukhanya kwe-500 nits kunye nokwahlukana kwe-80000: 1., Ubuninzi be-pixel ye-409 kunye nombala we-105% kwi-gamut ye-NTSC.
Ukongeza, ine- I-90 Hz yokuhlaziya inqanaba. Enkosi kweli zinga liphezulu lokuhlaziya, yomibini imidlalo enezicelo kunye nokukhangela kwiwebhu kuya kubonisa ukuhamba kwamanzi ngakumbi xa siyisebenzisa.
Isikrini sangaphambili sesi sixhobo Ayiyiyo yodwa ebandakanya, ekubeni, ngasemva, nathi siya kufumana 1,05-intshi isikrini ngasemva, ekunene kwimodyuli yekhamera.
Esi sikrini sincinci sinokucwangciswa ngoyilo olwahlukileyo lwewotshi ukubonisa ixesha, ibhetri ... jonga izaziso kunye nezikhumbuzo… Ukuba uqhele ukuba nefowuni enescreen esijonge ezantsi kwitafile yakho, olu hlobo lwesikrini lulungele wena.
Iikhamera ezi-3 kuyo nayiphi na imeko
Njengoko benditshilo ngasentla, ngasemva kwi-Doogee V20, sifumana i imodyuli yeefoto ebandakanya iikhamera ezi-3, iikhamera esinokugubungela ngazo naziphi na iintswelo esinokuba nazo ngamaxesha onke, nokuba singaphandle, ngaphakathi, ebusuku ...
64 MP main isivamvo ngobukrelekrele bokwenziwa. Inombombo wokuvula we-f/1,8 kunye ne-zoom yokukhanya ye-X.
Ikhamera ye 20 MP umbono ebusuku esivumela ukuba sithathe imifanekiso kunye neevidiyo ebumnyameni (isebenza ngokufanayo nayo nayiphi na ikhamera yokhuseleko).
I-8 MP ye-engile ebanzi esibonelela nge-engile yokujonga ye-130 degrees, ilungele iifoto zezikhumbuzo, amaqela abantu, izinto zangaphakathi ...
La ikhamera yangaphambili yeDoogee V20 Inesisombululo se-16 MP.
Ukumelana nazo zonke iintlobo zokothuka
Ukuba ujonge i-smartphone ehexayo ekwaziyo ukumelana nazo zonke iintlobo zeemeko kunye nezothuso ngaphandle kokuncama obona buchwepheshe bale mihla, i-Doogee V20 yi-smartphone oyifunayo.
I-Doogee V20 ayinayo kuphela iziqinisekiso eziqhelekileyo IP68 kunye IP69K, kodwa ikwabandakanya nesiqinisekiso somgangatho wasemkhosini, I-MIL-STD-810.
Esi satifikethi asiyi kuthintela kuphela naluphi na umkhondo wothuli okanye amanzi ukuba ungene kwisixhobo sethu, kodwa kwakhona ikhusela isixhobo phambi kokutshintsha kweqondo lobushushu ngesiquphe.
Ibhetri yeentsuku ezi-2
Ibhetri esiyifumana ngaphakathi kweDoogee V20 ifikelela 6.000 mah, umthamo osivumela ukuba sonwabele esi sixhobo ngokuqhubekayo kangangeentsuku ezi-2 okanye ezi-3.
Ukongeza, iyahambelana Ukutshaja ngokukhawuleza kwe-33W nge-USB-C port. Ikwaxhasa i-15W yokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Imibala, ukufumaneka kunye nexabiso le-Doogee V20
I-Doogee V20 iya kubetha imarike nge-21 kaFebruwari kwaye iya kuyenza ngemibala emi-3: knight emnyama, iwayini elibomvu y Phantom grey kunye ne-2 iintlobo zokugqiba: i-carbon fiber kunye ne-matte finish.
ukuba bhiyozela ukuqaliswa kwemarike yeDoogee V20, umenzi ubeka intengiso iiyunithi zokuqala ze-1.000 ngesaphulelo se-$ 100 ngaphezulu kwexabiso layo lesiqhelo, ixabiso layo lokugqibela lingama-299 eedola.
El ixabiso eqhelekileyo le terminalNje ukuba unyuselo luphelile, yi-399 yeedola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Doogee V20: ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa